Kooxda AC Milan oo samaysay wax aan u suurtagelin muddo 9 sano ah! + sawirro – Gool FM
Manchester City ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Shakhtar Donetsk… + SAWIRRO
Kooxda AC Milan oo samaysay wax aan u suurtagelin muddo 9 sano ah! + sawirro
Raage March 1, 2018
(Milano) 01 Maars 2018 – Kooxda AC Milan ayaa kacaa kuf iyo baaxaa deg ku bilaabatay horyaalka Talyaaniga jeer la is lahaa waxbaa sanadkan iska bedelaya markii uu horyaalku bilaabanayay, taasoo keentay inay kooxdani macallinkeedii cayriso bishii Nofeembar.
Waxaana Vinzenzo Montella lagu bedeley Gennaro Gattuso oo ah raace muddo 10 sano ka badan khadka dhexe uga dheelayay kooxda Milan, waxayna ahayd magacaabis laga bixiyay jawaabo kala geddisan, iyadoo ay dad badani aad u dhaliileen dookha maamulka Milan maaddaama uusan ninkani lahayn wax khibrad ah.
Yeelkeede, Gattuso ayaa sheegay inuu marka hore ku dadaali doono inuu wax ka qabto laba arrimood oo kala ah inay Milan koox ahaan u dheesho iyo inuu sare u qaado faya qabka jireed ee kooxda oo aad u hooseeyay, taasoo haatan ay wax badani iska bedeleen, iyadoo weli u tartamaysa 3 koob.
Kooxda Milan ayaan dhinaceeda dhulka la dhigin muddo 13 kulan ah oo ku aaddan tan iyo 23-kii Diseembar, waxaa dheer inaan wax gool ah shabaqeeda la taabsiinin 584 daqiiqo, taasoo ah wax aan dhicin tan iyo snaddii 2009-kii. #Gattuso effect
Messi oo diiday in diyaaraduhu ay dul maraan gurigiisa iyo shirkadaha duulimaadka oo ka hor yimid amarkiisa
Griezmann asxaabtiisa oo ku cadaadinaya inuu iska diido Barcelona oo uu u dhaqaaqo....